DHEGEYSO: Taliska ciidanka xoogga oo sheegay inay wax ka qabanayaan amniga deegaanada jubbaland | Hadalsame Media
Home Wararka DHEGEYSO: Taliska ciidanka xoogga oo sheegay inay wax ka qabanayaan amniga deegaanada...
DHEGEYSO: Taliska ciidanka xoogga oo sheegay inay wax ka qabanayaan amniga deegaanada jubbaland
(Muqdisho) 15 Luulyo 2018 – Taliska qeybta 43- aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in waxbadan ay ka qaban doonaan ammaanka deegaanada jubballand.
Generaal Cali Maxamuud boogmadoow taliyaha qeybta 43 aad ciidanka xoogga dalka oo gaaray magaalada baardheere ayaa xusay in deegaano badan oo ka maqan gacanta dowladda ay dib usoo celin doonan. Ka hor inta baardheere uusan tagin generaalka waxaa laga diiday in kismaayo uu ka dago,iyadoo markii danbe gobalka gedo uu gaaray.
Xaalada ayaa keentay hadalheyn aad u badan oo ku aadan diidmada maamulka jubbaland ay ku diiday inuu gudaha u galo magaalada generaalkan.
Previous articleDHEGEYSO: Khilaaf soo kala dhexgalay Cali Khaliif Galayr iyo ku xigeenkiisa
Next articleXIDDIG XAKAAR MARAY: Markii uu 6-jir ahaa awoowgiina waa la khaarajiyay isna waa la qixiyay + Sawirro (Qaybtii 2-aad)